Faahfaahinta Qarax Xoogan oo Ka Dhacay Magaaladda Muqdisho – Radio
August 5, 2017	363	Like
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka so baxaysa qarax xoogan oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah isugu jira , kaaso oo ka dhacay Agagaarka Trepiano ee wadada Maka Al-mukarama ee Magaaladda Muqdiso.
Qaraxani oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyaya ayaa wararku sheegayaan in saddex oo shacab ah ay ku dhinteen, halka lix qof oo kale uu dhaawacyo ka soo gaaray, kuwaasi oo loo qaaday cusbitaaladda Caasimadda
Baashi Cali Xaashi oo kamid ah wariyaasha warbaahinta Dowladda federaalka ayaa sheegey in uu arkayay dhimashada Hooyo iyo dhaawaca 4 carruur ah oo ay dhashay kuwaas oo la socday gaari Bajaaj ah oo Meesha qaraxu ka dhacay Mareyayay xiligaas.
Afhayeenka Wasaaradda amniga Dowladda federaalka ayaa sheegey in gaariga qarxay uu noociisu ahaa Kaarib, waxaana uu xaqiijiyay in dadkii ku waxyeeloobay ay kamid ahayd hooyo wadatay carruur yer kuwaasi oo iyana halkasi ku dhaawacmay.
saraakiil iyo mas’uuliyiin katirsan Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada xasilinta caasimadda ayaa gaaray goobta uu qaraxu uu ka dhacay
Inkastoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay hoos u dhaceen qaraxyada Muqdisho ka dhacay, haddan Toddobaadkii hore, maalintii Axadii Qarax aad u weyn ayaa ka dhacay wadadda Maka Al-mukaramah ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyoodey dad intaas ka badana waa ku dhaawacmeen.
Kooxda Al Qacida ee dalka Mali ayaa siideysay nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ...